Zụta Ọnọdụ Igwe Igwe Igwe Anọ na-edozi Iron Hair Straightener & Curler - Mbupu Na-akwụ ụgwọ & Enweghị |tụ | WoopShop®
Anọ Gear okpomọkụ ukpụhọde Iron Hair Straightener & Curler
Agba 3 1 2
Ụkwụ nkwụnye us EU UK AU
3 / anyị 3 / EU 3 / UK 3 / AU 1 / anyị 1 / UK 1 / EU 2 / anyị 1 / AU 2 / UK 2 / EU 2 / AU
Njikere Igwe Gear Njizi Iron Hair Straightener & Curler - 3 / anyị na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Asambodo Ogo Ngwaahịa: CE
Onye na-achịkwa okpomọkụ: Digital
Nkeji okpomọkụ: 160 Celsius
Ntinye ntutu: Akọrọ & mmiri
Max. okpomọkụ: 220 Celsius C
Ọnọdụ Assemblydọ Mgbakọ Ike: 360 Celsius Rotatable
Nọmba nlereanya: H56424
Akụkụ nke kpo oku efere: 110x42mm
Akụkụ Ndozi Nhazi: Ndị ọzọ
Ihe: Igwe gburugburu ebe obibi
Oge kachasị mma: 1-2 min.
Ihe nke efere / mmanya na-ekpo ọkụ: Tourmaline seramiiki
Itdị Typedị: Irongwè
Nkwụnye: EU / US
Ngwado egwu: Nano seramiiki PTC
Panelgba Ọkụ Mmiri: (4.5-4.8) x10cm / 1.77 `` x3.93 ''
Isi Iyi: eletriki
The ndụ ọrụ nke kwes kwes / mmanya: Ihe karịrị 50,000 ugboro
Dayameta nke onye na-eduzi ọkụ ahụ: Karịrị 31 mm
Dị: Onye na-edozi ntutu isi, Onye na-edozi ntutu isi, Igwe ntutu, ntutu ntutu seramika tourmaline na-enye ụda, ntutu kwụ ọtọ ntutu na 2 na 1, Ọkachamara na-ebuwanye ibu Ọ naghị emebi ntutu.
Ngwunye ọkụ ọkụ, 15 sekọnd nwere ike iru 230 C. Oge dị mkpirikpi nwere ike ịme ụdị ụdị ejiji, sekọnd 15 iji kpoo ahụ ọkụ. Ntughari Ntutu Ntughari Ntughari a gha enwe ntutu gi ogologo, silky, ma di nro n’ime nkeji!
Anọ-nzọụkwụ okpomọkụ, na-agbanwe agbanwe okpomọkụ ntutu. Belata frizz na static ọkụ eletrik, Mee ntutu silky na-enwu gbaa
Ihe na-adịghị mma Ion Nchedo, Nzube Oghere Ichapu, 30 sekọnd Na-egwu ọkụ ngwa ngwa, 4-ogbo Temnọgide Na-ekpo ọkụ Technology. adabara ntutu dị iche iche.
Akọrọ na mmiri sọrọ-ojiji, uzuoku maka ntutu isi na-elekọta.
Ọ na-eji teknụzụ dị elu iji hụ na ahụmịhe na-enweghị mbọ na-enweghị mgbagha, na-eme ka ọ dị mfe na ngwa ngwa iji dozie nke gị ma e jiri ya tụnyere ígwè dị larịị ma ọ bụ ndị na-akụ ọkpọ.
Ezubere iji belata nke ọma ma chebe ọkụ, na-echekwa ikpo ọkụ ebe ọ kwesịrị ịdị, na-ahapụ gị nsonaazụ nsonaazụ n'oge ọ bụla!
Ntị: Naanị mgbe eji ntutu mmiri, a ga-enwe uzuoku, Ala akọrọ Ọ bụghị
1 x Ndozi ntutu
Ezi igwe !!
Kpoo ngwa ngwa ma dị mma. Ọ dịghị atụ
Okpomoku zuru ka akwadoro
Natara ngwa ngwa ... na-arụ ọrụ nke ọma maka ọnụahịa ahụ
Abatala oge dị mma ma nwee afọ ojuju maka ihe ahụ, daalụ!